ကျောက်သားအသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းသစ် Elmina Granite - BaganMart
လှပပြီးဒီဇိုင်းဆန်သော ကြွေပြားများ Flooring
PVC Strip မျက်နှာကြက်များ နှင့် နံရံများကို အလှဆင်ခြင်း
ရိုးရှင်းသော ကြိမ်ကုတင် ( Single Bed )
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 645 view counts
ကျောက်သားအသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းသစ် Elmina Granite
Brand : Elmina
Model : GEL01 , GEL02, GEL03, GEL04
လုပျငနျးအမညျ : Niro Granite Myanmar- ဆွစ်ဇာလန် အရည်အသွေး ကြွေပြား Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 0973099552, 095008604, 09254540719
Size : 60x120cm, 60x60cm, 60x30cm
Color : Fuji White, Sierra Beige, Yukon Grey , Rocky Grey
Stone form : customer specified
Usage : Floor tiles, Stairs, Countertops, Wall claddings, palisades , Curbstone
Surfaces : Lappato & Structured
လှပဆန်းသစ်သော Elmina အမျိူးအစား Granite ဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Elmina Granite များကို စပိန်နှင့် ပေါ်တူဂီ မှ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် မူလအစမှ စတင်ထုတ်လုပ်ထားခဲ့သည်။ အလေးချိန် ပေါ့ပါးပြီး အရောင်များကိုလည်း လိမ္မော်ရောင်နှင့် အဝါရောင်အပြင် အခြားသောလှပမှုအသွင်ဆောင်သည့် အရောင်များကို အသုံးပြုကာ နူးညံချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်ရရှိအောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည်။ အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေ မျက်နှာပြင်အသွင် ကြည်လင်တောက်ပမှုများဖြင့် အေးမြသန့်စင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သော Elmina အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Niro Granite မှ ထုတ်လုပ်သော Elmina ကို4bold tones များပါဝင်ပြီး 60x60cm နှင့် 60x120cm ပုံစံဖြင့် ဖန်တီးဖွဲ့စည်းထားသည်။ တောင့်တင်းခိုင်မာမှု နှင့် အကြမ်းခံသော Structure ပုံစံရှိပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်လည်း လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိသည်။ ဆွစ်စလန် နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော အရည်အသွေးနှင့် ကြွေပြား နှင့် Granite များကို Niro Granite showroom သို့လာရောက်ကြည့်ရှု ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာလိုက်ပါသည်။
Niro Ceramic Group has been around for more than 30 years. Marketed under the brand name of Niro Granite, its first manufacturing plant was established in 1979 in Switzerland to announce the presence of porcelain tiles to the world. Ever since, varieties of tiles were exported across the globe and the rapid growth in the Asia markets eventually led to the success of Niro Ceramic Malaysia’s establishment in 1988 and Niro Ceramic Indonesia in 1995.\_\_r\_\_n \_\_r\_\_nAttributed to the constant market demand and expansion of our own capacity, Niro Ceramic Group established its operation in Foshan, China in 2001 as an outsourcing operation, where factories were carefully selected to produce according to our designs and specifications. A complete organization was established in China to ensure the same stringent quality product and customer service efficiency is achieved.\_\_r\_\_n \_\_r\_\_nThe continuous investment and adaptation to meet customers’ demands have caused yet another rapid expansion of Niro Ceramic Group’s network to Vietnam which led to the establishment of Niro Ceramic Vietnam in 2010. In that same year, Niro Ceramic Group also started its Distribution Center and Showroom in Spain. In 2013, one of the notable tile brands in Spain became part of the group, Zirconio was acquired by Niro Ceramic Group. In 2014, Niro Ceramic India is established. Havingadiverse network across the globe enabled Niro Ceramic Group to be the leading supplier that is backed with large stock keeping, ensuring prompt delivery with great credibility and customer satisfaction guaranteed.\_\_r\_\_n \_\_r\_\_nFor over3decades, Niro Ceramic has succeeded in preserving the Swiss Heritage of always delivering high quality products and services to the customers despite having many new product lines and numerous geographical expansions.\_\_r\_\_n \_\_r\_\_nMoving forward, our people are enthusiastic with great possibilities ahead. As clearly stated in our corporate mission statement, we strive to bring the best trendy collection of high quality porcelain tiles, efficient customer services and most important of all, the value added strategies to our partnerships all around the world.
အရည်အသွေးကောင်းပြီး ဒီဇိုင်းဆန်းသော Bloomsbury Granite
သဘာဝအလှတရားနှင့် Brooklyn Granite
ကြည်လင်တောက်ပသော ဒီဇိုင်းဖြင့် iPietra Granite
သဘာဝ သစ်သားသဖွယ် လှပသောSoftwood - Ecoforesta
For ကျောက်သားအသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းသစ် Elmina Granite
May I get the quotation for "ကျောက်သားအသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းသစ် Elmina Granite" ?